China Camouflage RPET Bag 100% Recycled Pocket Sport Style Running Bag Portable Cool Fashion messenger bag ho an'ny unisex factory sy mpamatsy | Changlin
Camouflage RPET Bag 100% Recycled Pocket Sport Style Running Bag Portable Cool Fashion messenger bag ho an'ny unisex
Ity lamina RPET ity dia camouflage izay toa tsara tarehy toy ny miaramila. Ny fanontana kamouflage dia nahatonga ny kitapo ho velona sy mangatsiatsiaka kokoa.
Size: 36.5L * 9.5W * 17Hcm fanakatonana: zipper
fampiharana: miantsena, mihazakazaka, isan'andro
Mahatsara azy: Camouflage, Portable, Fashion, Functional, biodegradable
Niorina tamin'ny taona 2017, Changlin dia zavamaniry sampan'ny Jiafeng Plastic Products CO., LTD izay manana traikefa 20 taona mahery amin'ny fanaovana kitapo. Ity kitapo ity dia azo havaozina 100% ny RPET. Tsy mora mando ilay fitaovana. Ankoatr'izay, ilaina be izy io amin'ny fiainana andavan'andro ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Fomba fijery mikraoba
Ny fomba camouflage dia mampitombo ny fahatsapana cool. Ao anatin'ilay kitapo dia misy sosona kely hafa misy fanidiana zipper hametrahana karatra banky manan-danja, sns izay tena azo ampiharina ary tsara ny endriny.
Amin'ny maha-fahaizany azy dia ampy ho an'ny olona izany rehefa mihazakazaka sy miantsena izy. 36.5L * 9.5W * 17Hcm ny habeny afaka hametraka ny findainao, ny rano ambany, ny sela, sns.
Ny lohan-doha misarika roa dia mety ho an'ny olona manana fahazarana samy hafa.
Ity famolavolana ity dia tena tsara fanahy amin'ny olona tsy mitovy endrika. Mora entina sy esorina izy io.
Ny orinasanay dia matihanina amin'ny famokarana kitapo. Miaraka amin'ny fanahin'ny "fanoloran-tena, fanavaozana, fiaraha-miasa, miasa mafy" ary ny fomba fiasa "mahomby, mahay mandanjalanja, mifampiresaka, miavaka", ny mpiasa rehetra dia manome ny mpanjifa taloha sy vaovao amin'ny vokatra sy serivisy tsara indrindra. Hahafinaritra anao ny ekipa matihanina indrindra manompo anao!
Previous: RPET miaraka amina fanontam-pirinty feno valizy feno valizy valizy valizy valizy paosy paosy
Manaraka: Kitapo trondro RPET 100% Kitapo fanatanjahan-tena paosy fanatanjahan-tena mihazakazaka kitapo Portable Cool Fashion messenger bag ho an'ny unisex
Kitapo makiazy kosmetika modely pu vakansy ...
Kitapo polyester miloko marevaka famaranana maharitra C ...
Eco-namana voajanahary EVA 3D eyelets fitaovana c ...
Kitapo lamba rongony landihazo Kitapo makiazy kosmetika ...